Archive du 20170916
Tsy fandriampahalemana Olona 9 maty naripaky ny dahalo
Variana mieboebo aty an-drenivohitra ny fanjakana amin’ny resaka drafitra an-taratasy momba ny fandriampahalemana. Aripaky ny dahalo kosa ny olona any Atsimon’ny Nosy.
Fifidianana mangarahara Manome toky ny CENI
Nampahafantarina ampahibemaso omaly ny tomban’ezak’ireo asan’ny CENI nandritra izay fe-potoam-piasana nodiaviny izay.
Faharo Ratsimbalison “Lany andro mivezivezy ny filoham-pirenena”
Tsy misy zava-banona intsony eto amin’ny firenena fa mena avokoa ny tondro rehetra.
Demokrasia Lesoka ny elanelana eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka
Nanatanteraka andro fandinihana momba ny lohahevitra «Ny zava-misy mikasika ny demokrasia eto Madagasikara» teny amin’ny Falda
Vahoaka Malagasy Tadiavin’ny mpanao politika hofandrihana
Milaza ny mpanohana ny fitondram-panjakana fa ilaina ny fanovana ny lalàmpanorenana taorian’ny nivoahan’ny vaovao tamina haino aman-jery vahiny iray.
Fanovana lalampanorenana Fanolorana ny soson-kevitry ny rehetra no vahaolana
Tena tsy mazava amiko mihitsy, hoy ny depiote Théophile Christian avy amin’ny vondrona parlemantera MMM teo aloha,
Savorovoro hilantoan’iza ?
Efa tamin’ny volana aogositra no nahiahiana ny fisiana trangan’aretina pesta teto amintsika, ho an’ity taona ity, raha ny fanazavan’ny minisitry ny fahasalamana.
Tontolon’ny fitaterana Nodimandry ny filohan’ny UCTU
Nodimandry omaly zoma 15 septambra Andriamatoa Bernardin Andriambinintsolomora filohan’ny UCTU na ny “Union des cooperatives de transport urbain”.
Benenitra Faritra Atsimo Andrefana Misy aretina hafahafa mamely ny kilonga madinika
Amin’ny ankapobeny dia milamina ny any amin’ny distrikan’i Benenitra Faritra Atsimo Andrefana, hoy ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana,
Vondrona STAR Miara-miasa amina tantsaha Malagasy miisa 20.000
Vondrona iray anisan’ny manampy sy manohana ireo tantsaha Malagasy eto amintsika ny vondrona Star.
Fitrandrahana hazandranomasina Misedra olana ny mpandraharaha Malagasy
Mbola betsaka amin’ireo mpandraharaha Malagasy eto amintsika misehatra amin’ny asa fitrandrahana hazandranomasina no misedra olana. Anisan’ireny Ramatoa Razakanavalona Bakoly filoha mpanorina ny poissonnerie Manda na dia manana taratasy ara-dalàna avy amin’ny minisiteran’ny jono aza.
BNI Madagascar Manakaiky ny tantsaha
Akaikin’ny tantsaha mpamokatra hatrany ny banky BNI. Nisy ny fifanakalozan-kevitra niarahany tamin’ireo tantsaha mpamokatra,
HYDELEC Sahanivotry Hamokatra herinaratra hatramin’ny 20 MW
Tsy mbola mahavaly ny filan’ny sarambabem-bahoaka ny herinaratra vokatra eto Madagasikara.
Mpampianatra FRAM 10.000 notolorana fifanaraham-piaraha-miasa
Tafakatra 40.000 hatreto ireo mpampianatra FRAM noraisin’ny fitondram-panjakana ho mpiasam-panjakana raikitra. Miisa 10.000 indray mantsy omaly no notolorana fifanaraham-piaraha-miasa avy amin’ny faritra 20 manerana ny Nosy, andiany fahefatra.
RN4- Fanafihana sy vono olona Nitondra fanampiana i Marc Ravalomanana
Taorian’ny fanatrehana ny fanasan'ny Fiangonana Katolika tany Mahajanga sy ny fifampizarana mofomamy tamin'ireo mpikatroky ny Antoko TIM tany an-toerana, dia nitodi-doha niverina aty Antananarivo i Marc Ravalomanana sy ny mpiara-dia taminy.